जम्मुका�ध, लाहान, चिन्तुटार र नाग्मामा सभा
काठमाडौ�, भाद्र ३१ । राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियानको २२ औ� दिन आज देशका विभिन्न भागहरूमा सभाहरू सम्पन्न भएका छन् । अभियानको ४ नम्बर टोलीले दैलेखको जम्मुका�धमा, १ नम्बर टोलीले सिराहाको लाहानमा, २ नम्बर टोलीले तनहू�को चिन्तुटारमा र ५ नम्बर टोलीले जुम्लाको नाग्मामा सभा सम्पन्न गरेका छन् ।
इटहरी, रामपुर र गोर्खामा सभा
काठमाडौ�, भाद्र ३० । राजमोले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियान २०७० को कार्यक्रम अन्तर्गत आज देशका विभिन्न भागमा सभाहरू सम्पन्न भएका छन् । अन्धजातिवादीहरूको आक्रमणको सामना गर्दै आएको अभियानको एक नम्बर टोलीले आज सुनसरीको इटहरीमा जातिवादीहरूको आक्रमणको योजनालाई विफल पार्दै शानदार रूपमा जुलुश प्रदर्शन सहित सभा सम्पन्न गरेको छ । अभियानको ३ नम्बर टोलीले आज पाल्पाको रामपुरमा विशाल सभा सम्पन्न गरेको छ, जहा� एमाले, काङ्ग्रेस र एमाओवादीका झण्डै तीन सय स्थानीय नेता�कार्यकर्ता ती पार्टी परित्याग गरी राजमोमा प्रवेश गरेका छन् । टोली नम्बर २ ले आज गोर्खाको सदरमुकाम गोर्खा बजारमा सभा सम्पन्न गरेको छ ।
जातिवादीहरूको आक्रमणलाई परास्त गर्दै धरानमा सभा
काठमाडौ�, भाद्र २९ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको अभियान टोलीमाथि सुनसरीको धरानमा जातिवादीहरूको समूहले आज पनि आक्रमण गरेको छ । राजमोको अभियान टोलीमाथि त्यस क्षेत्रमा जातिवादीहरूद्वारा भएको यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण थियो । राजमोका नेता�कार्यकर्ताहरूले उच्च साहसका साथ उक्त आक्रमणको सामना गर्दै त्यहा� जुलुस प्रदर्शन सहितको सभा सम्पन्न गरेका छन् । राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. ले आजै एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त आक्रमणको घोर भत्र्सना गर्नु भएको छ । बाँकी
आक्रमणबाट अभियान रोकिने छैन ः सिंह
काठमाडौ�, भाद्र २८ । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जातिवादी�माओवादीको आक्रमणबाट राजमोको अभियान नरोकिने बताउनु भएको छ । जातिवादी आक्रमणको सामना गर्दै पूर्वाञ्चलमा अभियान चलाइरहेको राजमोको १ नम्बर टोलीले आज झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको �विशेष पत्रकार भेटघाट� कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री सिंहले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । बिर्तामोडको त्यही ठाउ�मा भाद्र २२ गते अभियान टोलीमाथि जातिवादीहरूले आक्रमण गरेका थिए । आज त्यही स्थानमा पत्रकारहरूका माझ उपस्थित भएर महामन्त्री सिंहले आक्रमणको सामना गर्दै अभियान दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने उद्घोष गर्नु भयो । बाँकी
गोरुसिङ्गे, बिन्ज्याल र छिन्चुमा सभा
काठमाडौ�, भाद्र २७ । नेकपा�माओवादी नेतृत्वको मोर्चाद्वारा निर्वाचनका विरुद्धमा आयोजित उपत्यका र पूर्वी नेपालबन्दलाई छिचोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाको अभियान टोलीहरूले आज कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे, सिन्धुपाल्चोकको बिन्ज्याल र सुर्खेतको छिन्चुमा सभा सम्पन्न गरेका छन् । अभियानको ३ नम्बर टोलीले गोरुसिङ्गेमा, २ नम्बर टोलीले बिन्ज्यालमा र ४ नम्बर टोलीले छिन्चुमा सभा सम्पन्न गरेका हुन् । ५ नम्बर टोलीले जुम्ला जिल्लाको गोठिज्युलामा र टोली नम्बर १ ले मोरङको विराटनगरमा आज जनभेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी
भिङ्ग्रीमा विशाल सभा सम्पन्न
काठमाडौ�, भाद्र २६ । राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियान २०७० को कार्यक्रम अन्तरगत आज प्यूठानको भिङ्ग्रीमा विशाल सभा सम्पन्न भएको छ । अभियानको टोली नम्बर ३ को कार्यक्रम अन्तरगत भएको सो सभालाई राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. ले प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्नु भएको छ । टोली नम्बर ४ ले आज बा�केको कोहलपुरमा सभा सम्पन्न गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा २ नम्बर टोलीको कार्यक्रम तय भए पनि आज त्यहा� कार्यक्रम हुन सकेको छैन । अभियानको १ नम्बर टोली आज मोरङको विराटनगरमा जनभेटघाटमा व्यस्त रह्यो भने हिजो जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा सभा सम्पन्न गरेको अभियानको ५ नम्बर टोली आज जुम्लाकै गोठिज्युला पुगेको छ । टोलीले भोलि त्यहा� कार्यक्रम गर्नेछ । बाँकी
जारी छ राजमोको अभियान
काठमाडौं, भाद्र २५ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय प्रचारात्मक अभियान आज सोह्रौं दिन पनि जारी रहेको छ । अभियान अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानहरूमा आज पनि आमसभा, कोणसभा तथा जनभेटघाट लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । कर्णाली अञ्चलका विकट जिल्लाहरूमा अभियान संचालन गरिरहेको पा�च नम्बर टोलीले आज जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा बजारमा, दुई नम्बर टोलीले भक्तपुरको गठ्ठाघरमा र चार नम्बर टोलीले बर्दियाको भुरीगाउ� र बा�सगढीमा सभा सम्पन्न गरेका छन् ।